Vaovao - Anton-javatra lehibe 5 misy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny fanamarihana ny milina fanamarihana laser
Masinina fanamarihana laser amin'ny kabinetra
Masinina fanamarihana laser mizara
milina fanamarihana laser azo entina
5 Ireo antony lehibe manimba ny kalitaon'ny fanamarihana ny milina fanamarihana laser
Ny fahombiazan'ny milina fanamarihana laser dia hihena miadana rehefa avy ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra. Inona no anton'izany? Inona avy ireo antony lehibe manimba ny kalitaon'ny marika fanamarihan'ny milina?
1. Ny toerana ifantohan'ny masinina fanamarihana laser
Ny toerana ifantohan'ny masinina fanamarihana laser dia ny fiatraikany amin'ny kalitaon'ny fanamarihana. Laser amin'ny toeran'ny fifantohana fotsiny hahatratrarana hery sy vokany faran'izay betsaka, toerana ifantohana hamaritana raha marina ny marina, misy fiatraikany lehibe amin'ny kalitaon'ny fanodinana, misy fiatraikany amin'ny laser raha toa ka ny anjara toerana mety amin'ny workpiece, hahatratrarana ny vokatra fanodinana. Ny fanitsiana ny haavon'ny solomaso mihetsiketsika mandritra ny asan'ny laser dia mamela ny laser hahatratra ny toetrany matanjaka indrindra. (Ny fanjakana matanjaka indrindra dia aseho amin'ny alàlan'ny laser mamoaka jiro fotsy sy manga manjelanjelatra, miaraka amina feo mafy be toy ny vava).
2. Ny fahombiazan'ny laser beam mifantoka Ny fahombiazan'ny laser beam mifantoka mivantana amin'ny kalitaon'ny marika, ny fifantohan'ny laser laser dia kely dia kely, noho izany dia mifantoka be ny angovo. Raha tsy misy fahombiazan'ny fifantohana tsara, tsy afaka mahazo ny toerana laser tsara ianao, tsy afaka mampiasa ny haavon'ny angovo avo lenta amin'ny laser, ary tsy afaka mahazo milina fanamarihana laser. Amin'ny toe-javatra mifantoka tsara indrindra dia hita eo anelanelan'ny fitaratra sy ny lasibatra foana ny andilam-by.
3. Ny hafainganam-pandehan'ny taratra laser
Ny hafainganam-pandehan'ny fivezivezy amin'ny laser dia zava-dehibe ihany koa. Ny fizotran'ny laser sy ny fifamatorana ara-materialy, ny hafainganam-pandehan'ny taratra laser dia hisy fiantraikany amin'ny vokatry ny laser sy ny fifandraisan'ny materialy.
4. Fomba fanamainana milina fanamarihana laser
fomba fanamainana milina marika laser tsy tokony hohamaivanina. Ny rafitra mangatsiaka dia ny milina laser iray manontolo izay azo marim-pototra sy maharitra marika, ny hafanana tsy ny fiantraikan'ny fandosiran'ny laser ihany koa, fa hisy fiantraikany amin'ny rafitra faribolana, ny masinina manamarika ny laser amin'ny alàlan'ny fitaovana vita amin'ny rivotra, mampihena ny mari-pana anatiny amin'ny vatana, ary mampihena ny tsy fahombiazan'ny masinina, manatsara ny fahamendrehan'ny fitaovana ary manana fiparitahana hafanana haingana be.
5. Fitaovana fanamarihana tamin'ny laser
Raha ny marina, ilay milina fanamarihana laser ihany, noho ny fanamarihana zavatra hafa, samy hafa ihany koa ny tsipika tsara aminy, raha hafa ny angovo laser ampiasaina, dia ho hafa koa ny tsipika fanamarihana tsara.
1 # Lvting Rd, Cangqian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Sina. 310023